CCNP वायरलेस रहित प्रोफाईल कसरी गर्ने - आईटीटी टेक स्कूल
27 जुन 2017
CCNP वायरलेस प्रमाणित प्रोफेशनल
CCNP वायरलेस प्रमाणपत्र के हो?
चरण 1: प्रमाण पत्र लिने योग्य योग्य मौकालाई हेर्नुहोस्
चरण 2: प्रमाणीकरण कमाई
चरण 3: प्रमाणिकरण को नविकरण
सिस्को धेरै पेशेवर स्तर प्रमाणपत्र जस्तै प्रस्ताव गर्दछ CCNA र CCNP। देखि CCNP एक भन्दा उच्च स्तर हो CCNA, यो अधिक विनाशकारी छ र अधिक प्रमुख जानकारी र उपाधि अनुरोध गर्दछ। यदि वायरलेस प्रमाणीकरणको घटना हुनु पर्छ भने, ताररहित नेटवर्किंग मानकहरू र परिकल्पनाले प्रयोगशालाका लागि निर्माणको लागि वायरलेस नेटवर्किङ आवश्यकताहरू पूरा गर्न निर्माणको लागि प्रयोग गरिन्छ। प्रमाणीकरण को माध्यम ले सिकन को साथ, पेशेवरों को प्रभावी ढंग देखि व्यापार को आवश्यकता को एक कार्यात्मक स्थापना मा एक व्याख्या गर्न सक्छन्। अब हामीलाई CCNP वायरलेस प्रमाणीकरण विस्तारको लागि एक मौका दिनुहोस्।
सिस्को प्रमाणित नेटवर्क व्यावसायिक वायरलेस प्रमाणीकरण सिस्को वस्तुहरू प्रयोग गरी वायरलेस सञ्जाल नवाचारमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ। यो 2009 मा परिचित थियो जसलाई विकसित व्यवसाय को आवश्यकताहरु लाई ध्यान दिनुहोस। प्रमाणपत्र सिस्कोको ताररहित सञ्जालहरू आवरण, योजना बनाउने, सुरक्षित र जाँच गर्दै।
CCNP वायरलेस स्प्रेडिङ साइटहरू जस्तै साइट अध्ययनहरू, क्लाइन्ट पूर्वाधार प्राप्त गर्ने, ताररहित सञ्जालहरू कार्यान्वयन गर्दै, वायरलेस ल्यान नींव र धेरै अन्य असामान्य अवस्था बिन्दुहरू सुरक्षित राख्ने विषयहरू फैलाउँछन्। यस प्रमाणीकरण भएको प्रोफेशनलहरू विश्वव्यापी रूपमा बुझ्दछन् जसलाई सिस्कोको ताररहित ग्याजेटहरूसँग ह्यान्ड्स-फ्रान्समा संलग्नता गरिएको छ। यो राम्रो कर्मचारीहरू र उच्च वेतन खोज्ने पेशेवरहरूको लागि उत्तम प्रमाणिकरण हो। प्रमाणीकरण लिन को लागी दिइएको छ।
यो पनि हेर्नुहोस्:CCNA प्रमाणीकरण - एक पूर्ण मार्गदर्शक
सञ्जाल ड्राफ्टमेन, सञ्जाल प्रबन्धक र सञ्जाल विशेषज्ञहरू जस्तै ताररहित नेटवर्किङ प्रोफेसरहरूले उनीहरूको अन्तरदृष्टि र आकाक्षाहरू बढाउन प्रमाणीकरण लिन सक्छन्। ती पदहरू खोजिरहेका व्यक्तिहरूले कामका लागि सम्बन्धित उद्घाटनका लागि योग्यता हावा गर्न यो चयन गर्न सक्छन्। यो आकलन गरिएको छ कि कार्यहरू 20% 2008 र 2018 को बीचमा अधिक वृद्धि हुनेछ। व्यापार विकासको दरले 30 को वरिपरि यस क्षेत्रमा पेशेवरहरूको लागि लाभदायक बनाउनुपर्दछ। भविष्य प्रमाणपत्र प्राप्त गरेपछि उनीहरूको दिशामा काम गर्ने कामको लागि एक टन खुल्ला देखिन्छ।
एक व्यक्तिलाई प्रमाणित गर्न आवश्यक छ कि तपाइँसँग CCNA वायरलेस वा CCIE प्रमाणीकरण हुनुपर्छ। यो CCNP को वायरलेस प्रमाणीकरण प्राप्त गर्न को लागी, त्यो पहिले को आवश्यकता हो कि सिस्को प्रमाणित नेटवर्क एसोसिएशन वायरलेस या सिस्को प्रमाणित इन्टरनेटवर्क विशेषज्ञ प्रमाणीकरण कुनै पनि ट्र्याकमा।
वायरलेस जाँचको लागि चार परीक्षाहरू छन्। यी 642-731 CUWSS, 642-741 IUWVN, 642-746 IUWMS र 642-736 IAUWS। प्रत्येक परीक्षामा 50 मा 60 प्वाइन्ट समावेश छ जुन एक घण्टा र आधामा समाप्त हुनुपर्छ। प्रत्येक परीक्षाको लागि, त्यहाँ5दिनहरूको प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हो। यी पाठ्यक्रमहरू इन्टरनेटरले ताररहित सञ्जाल सेटअप गर्न तयार पार्दछ, विभिन्न तत्वहरू जस्तै आवाज रहित वायरलेस एरिया नेटवर्क प्रशासनहरू, पोर्टेबिलिटी फायदाहरू र सम्भाव्य खतराहरू विरुद्ध सञ्जालमा सुरक्षित राख्छन्।
प्रत्येक पेशात्मक प्रमाणिकरण सिस्को केवल तीन वर्षको एक पटकको लागि पर्याप्त रहन्छ। यस युग पछि, प्रमाणीकरण ढङ्ग र पदोन्नति धारक फेरि फेरि व्यावसायिक फाईलको लागि योग्यता छैन। उनीहरूलाई कृतज्ञता राख्नको लागि पुन: प्रमाणीकरणको लागि आवेदन गर्नु पर्छ। ब्राउज गर्न चार विकल्प छन्। प्रमाणपत्र समाप्ति अघि वा कुनै पनि CCIE परीक्षाहरू मध्ये कुनै पनि पास गर्नु पर्छ उसले कुनै पनि व्यावसायिक तह परीक्षा पास गर्नु पर्छ। तेस्रो विकल्प अहिले प्रदान गरिएको पास पारित छ सिस्को प्रमाणित डिजाइन विशेषज्ञ (सीसीडीई) बनाइएको वा तल पृथ्वी परीक्षाहरूमा। अन्तिम विकल्प सिस्को प्रमाणित आर्किटेक्ट (CCAr) प्रमाणीकरण को लागि बोर्ड बैठक र सर्वेक्षण आवश्यकताहरु लाई पास गर्न को लागी छ जो कि उनको सबै निचले स्तर प्रमाणपत्र को पुन: पुष्टि गर्दछ।
CCNP वायरलेस एक ठूलो राशि प्रमाणीकरण हो जुन आवश्यक प्रतियोगिहरु ले क्षेत्रमा उत्कृष्ट आधार हुनुपर्छ। यसमा तथ्य को प्रकाश मा परिकल्पनात्मक र कार्यात्मक शिक्षा दुवै समावेश छ कि एक पटक प्रमाणित हुन्छ, उनि एक सत्य नेटवर्किंग अवस्था मा काम गर्नेछन्। यसले प्रमाणपत्र मार्फत जो केहि ह्यान्ड्स-सक्षम क्षमता परीक्षण गर्नेछ।
यो पनि हेर्नुहोस्:किन कम्पनीहरु को सुरक्षा पेशेवरों र प्रशासन CEH प्रमाणित?
CCNP सहयोग प्रमाणीकरण बारे जान्न महत्त्वपूर्ण कुरा